Ukukhanya Okuhlinzwa, Ithebula Lokusebenza, I-Pendant Yezokwelapha - iWanyu
IShanghai Wanyu Medical Equipment Co, Ltd. isebenza kakhulu ekuthengiseni okokusebenza kwezokwelapha, igxile ekukhangisweni kwemishini yegumbi lokusebenza, kufaka phakathi amalambu okusebenza, amatafula wokusebenza, nezinsika zezokwelapha. Umugqa wonke wemikhiqizo uthengiswa emhlabeni wonke, futhi sinabalingani abasebenzela abodwa emazweni amaningi aseYurophu naseMelika.
Imikhiqizo engaphezu kwengu-60
Umhlinzeki Wegolide: 13
Isingeniso i-LEDD500 / 700 ibhekisele ekukhanyeni kwezokwelapha kwe-dome kabili. Indlu yokukhanyisa yezokwelapha yasesibhedlela yenziwe nge-aluminium alloy enepuleti elijiyile le-aluminium ngaphakathi, okusiza kakhulu ekusakazekeni kokushisa. Isibani isibani se-OSRAM, esiphuzi nokumhlophe. Isikrini sokuthinta se-LCD singalungisa ukukhanya, izinga lokushisa kombala kanye ne-CRI, konke okungashintshwa kumazinga ayishumi. Ingalo ejikelezayo isebenzisa ingalo engasindi ye-aluminium ukubeka kahle. Kunezinketho ezintathu zezingalo zasentwasahlobo, ...
Isingeniso i-LEDD620 / 620 ibhekisa ophahleni lwendlu oluphindwe kabili oluphakanyisiwe. Umkhiqizo omusha, othuthukisiwe ngesisekelo somkhiqizo wokuqala. Aluminium ingxubevange igobolondo, isakhiwo sangaphakathi esithuthukisiwe, umphumela ongcono wokushisa ukushisa. 7 isibani amamojula, isiyonke 72 ama, imibala emibili aphuzi nomhlophe, eliphezulu OSRAM ama, izinga lokushisa 3500-5000K adjustable, CRI ephakeme kuno-90, illuminance angafinyelela 150,000 Lux. Iphaneli yokusebenza yi-LCD touch screen, illuminance, color ...
Isingeniso i-LEDD730740 ibhekisele kuhlobo oluphindwe kabili lwe-petal light. Ekamelweni lokusebenza nebhokisi lokuhlanza, uhlobo lwe-petal lungagwema ukuvimba ukugeleza komoya futhi linciphise kakhulu izindawo ezinesiyaluyalu ekugelezeni komoya okuyi-laminar. I-LEDD730740 ukukhanya kwezokwelapha okuhlinzekwa kabili kunikeza ukukhanya okukhulu kwe-150,000lux kanye nokushisa kombala okuphezulu kwe-5000K ne-CRI enkulu yama-95. Isibambo senziwe ngezinto ezintsha, resistan ...
LEDD500 / 700C + M Uphahla ...
Isingeniso i-LEDD500700C + M ibhekisela ekukhanyeni kwegumbi lokusebenza le-LED eliphindwe kabili. Isistimu yekhamera eyakhelwe ngaphakathi nesiqaphi sokulenga sangaphandle singasetshenziselwa ukuqeqeshwa. Inika amandla imisebenzi yokuqapha nokurekhoda. Faka isicelo ku ■ ukuhlinzwa esiswini / okujwayelekile ■ izifo zabesifazane ■ ukuhlinzwa kwenhliziyo / imithambo / i-thoracic ■ i-neurosurgery ■ i-orthopedics ■ i-traumatology / eziphuthumayo NOMA ■ i-urology / TURP ■ ent / Ophthalmology ■ i-endoscopy Angiography Isici 1. Uhlelo lwekhamera Ikhamera eyakhelwe ngaphakathi, asikho isidingo sokulengiswa it ngesinye isethi ...
TS Manual umfutholuketshezi Su ...
Isingeniso TS etafuleni wokubacindezela wokubacindezela sui ...
Isingeniso TDY-1 kagesi etafuleni yokusebenza ado ...
I-TDY-Y-1 Inhloso eminingi ...
Isingeniso TDY-Y-1 kagesi operatin wokubacindezela ...
Isingeniso FD-G-2 enza izinto ezihlukahlukene etafuleni lokubelethisa i ...
Isingeniso TS-D-100 isho ingalo ephindwe kabili elec ...
TS-DQ-100 Double Ingalo E ...
Isingeniso TS-DQ-100 isho ingalo ephindwe kabili ele ...
Isingeniso i-QF-JX-300 isho i-ICU br ...
TD-TS-100 Imboni Di ...
Isingeniso i-TD-TS-100 isho ukwelashwa okuhlanganisiwe ...
Ngabe ilambu elisebenza ophahleni alikwazi ukufakwa egumbini le-OR elinobude obuphansi?
Eminyakeni eminingi yokuhlangenwe nakho kokuthengisa nokukhiqiza, sithole ukuthi abanye abathengi badidekile kakhulu lapho bethenga ukukhanya okusebenzayo. Ngokukhanya kwelayili okusebenza ophahleni, ukuphakama kwayo kokufaka okungu-2.9 wamamitha Kepha eJapan, Thailand, Ecuador, noma ezinye ...
I-oda Lokulungisa Eliphethwe iBelated for Lighting Operating
Lapho amakhasimende angaphandle ethi angikaze ngithenge ilambu lakho lokusebenza, ingabe ikhwalithi yalo ithembekile? Noma ukude kakhulu nami. Yini okufanele ngiyenze uma kunenkinga yekhwalithi? Konke ukuthengisa, ngalesi sikhathi, kuzokutshela ukuthi imikhiqizo yethu ihamba phambili. Kodwa uyabakholelwa ngempela? Njengomsebenzi ...